I-Apt1 @ EdenBrae - Serene, Walkable, Modern Retreat, Ibizwe Okuhamba Phambili e-Bham - I-Airbnb
I-Apt1 @ EdenBrae - Serene, Walkable, Modern Retreat, Ibizwe Okuhamba Phambili e-Bham
Le fulethi eliqashwe njengenye yezindawo eziqashisayo ezibanda kakhulu edolobheni, leli fulethi eligcwele umbhede ongu-1/1 yokugezela eligcwele ilanga liyindawo ekahle yokuphumuza umoya. Uzoyithanda le ndlela yokuzilibazisa ehamba kahle futhi ezolile. Jabulela izindawo ezinhle zangaphandle zale ndawo, okuhlanganisa umpheme ongaphambili obanzi, umgodi womlilo, indawo yokuphumula engaphandle ekhishiwe, igrill yegesi yemvelo, i-foosball, i-cornhole, ama-hammocks nemithombo. Ihlanzwe ngokomsebenzi futhi yagcwala ngokugcwele ikhofi lasendaweni, ukukhethwa okubanzi kwetiye, nazo zonke izinto zangasese eziphilayo, ze-paraben, nezingenalunya ongase uzidinge. Zijabulise nge-wifi yamahhala engenamkhawulo, i-Netflix, i-Hulu, ne-Disney+. Ngeke ufune ukuhamba!
Ingabe ufuna ukuhlola indawo? Zama i-walkthrough yethu ebonakalayo: https://my.matterport.com/show/?m=dAScA1JLhgF
Ingxube yesimanjemanje neyevintage, uzothanda ukuzulazula endaweni yokuhlala yaleli fulethi, ngokubukwa okuhle kwezingadi zale ndawo kanye nomthombo. Ukuthinta okucatshangelwayo, njenge-lavender eyomisiwe, kuhlose ukwenza ukuhlala kwakho kuphumule ngendlela emangalisayo futhi kujabulise. Gcoba futhi ufunde incwadi endaweni yethu yokuphumula ethokomele, yesikhumba yakudala, noma khululeka futhi ubukele i-Netflix kusofa omuhle wevelvet.
Udinga ukwenza umsebenzi othile ngenkathi usahleli nathi? Ayikho inkinga! I-Wi-fi esheshayo kanye nedeskithophu ephathekayo yenza kube lula ukuhlala unolwazi ngesivinini. Uma usuqedile ukusebenza, thatha isihlalo endaweni yokudlela enethezekile noma ubuke i-TV -- kufakiwe iNetflix, iHulu, neDisney+.
Ikhishi linazo zonke izidingo zakho eziyisisekelo ezimboziwe: i-oven convection toaster, i-microwave, isiqandisi esincane, nenqwaba yezitsha nezinto zokusebenza. Qala izinsuku zakho kahle ngohwebo lwethu oluhle, ikhofi eliphilayo. I-burr grinder kanye ne-French press yenza inkomishi yekhofi emnandi. Futhi, uma ikhofi kungeyona into yakho, sinokukhetha okubanzi kwetiye le-herbal ne-caffeine!
Jabulela abaculi bendawo ababoniswa odongeni lwegalari oluholela endlini yokugezela negumbi lokulala.
Indlu yokugezela esesitayeleni, yesimanje igcwele amathawula amaningi, okomisa izinwele (ene-diffuser), ama-q-tips namabhola kakotini. Futhi, uma ukhohlwa izinto zakho zangasese ekhaya, ungakhathazeki! Sihlinzeka nge-organic, i-shampoo engena-paraben, i-conditioner, ukugeza umzimba, kanye nezinto zokugcoba.
Ikamelo lokulala linakho konke okudingayo ukuze uhlale unethezekile. Izindonga zokulala zihlotshiswe ngezithombe ezinhle ezivela kubaculi basekhaya nabakwamanye amazwe. Uzolala ngokungenasici kumatilasi we-memory foam osayizi wenkosi kanye namashidi e-Buttery Comphy. Lengisa izingubo zakho ekhabetheni elivulekile lesimanje, lemboni, futhi ujabulele isibani esiseceleni kombhede, esiphindeka kabili njengesipika se-bluetooth. Izitshalo zomoya ezilengayo ziphefumulela ukuphila kancane ekamelweni. Ungabuka i-Netflix ulele ku-smart Roku TV. Futhi, emashalofini ekhabetheni, uzothola ibhodi lensimbi ne-ayina uma udinga ukunakekela noma yimiphi imibimbi ewuhlupho ngesikhathi uhlala. Ilondolo iyatholakala futhi endaweni engaphansi, uma udinga ukugeza noma yini ngenkathi unathi.
Hamba ngaphandle komnyango wangaphambili wefulethi, futhi uzothola indawo yakho yokudlela yangaphandle kuvulandi ongaphambili. Ziphuze ikhofi lakho ngokubuka amagceke. Noma, uma ufuna ukusabalala, hlala endaweni evulekile yompheme ongaphambili. Umpheme ongaphambili ubheke phezu komthombo we-heron womlando wendawo. Umthombo we-heron -- esinye sezici ezintathu zamanzi endaweni -- udala isimo esinokuthula egcekeni elingaphambili.
Hamba uzungeze inkundla yendawo, futhi uzothola izindawo eziningi zokuphumula nokuzijabulisa. I-screened kuvulandi ngemuva kwendlu inikeza indawo enhle yokuphumula. Itholakala ngokuthi ofike kuqala, ofike kuqala kuzo zonke izivakashi, indawo iqukethe itafula lokudlela lomphakathi labantu abayi-12 kanye nebhentshi elintofontofo elikhulu.
Uma ufuna ukupheka ngesikhathi sokuhlala kwakho, sikuphathele! Izivakashi zamukelekile ukusebenzisa ikhishi elingaphandle, elidlala i-grill entsha, isifuba seqhwa esikhulu, kanye nebha yokusebenza enkulukazi. I-Kenmore Elite i-grill yemvelo eyizishisi ezinhlanu inokubili into eshisayo kanye ne-side burner eyengeziwe yokushisisa amasoso nezinhlangothi. Noma, thatha isihlwathi noma ugone ngaphansi kwezihlahla zomsedari kwenye yama-hammocks ethu anosayizi omkhulu, wase-Brazilian double.
Inqubomgomo Yezilwane Ezifuywayo:
Njengabathandi bezinja, siyakwamukela nabangane bakho abanoboya. Sicela uqiniseke ukuthi uyabafaka njengomuntu omdala owengeziwe esibalweni sakho sezihambeli lapho ubhukha. Sicela zonke izivakashi ezinezilwane ezifuywayo zibuyekeze inqubomgomo yethu yezilwane ezifuywayo ngaphambi kokufika. Ngamafuphi, sicela uhlanze umdlwane wakho, uwagcine eboshiwe lapho ungaphandle nasezindaweni ezivamile, futhi ungawashiyi angagadiwe isikhathi eside. Wamukela umthwalo wemfanelo ogcwele ngamaphuphu akho ngenkathi esahlala nathi, ngakho-ke sicela ushiye noma yimiphi imidlwane ephazamisayo noma enolaka ekhaya.
I-TV ene- Hulu, I-HBO Max, I-Netflix, I-Roku, Apple TV, Disney+, I-Amazon Prime Video
4.95 out of 5 stars from 412 reviews
4.95 · 412 okushiwo abanye
Sineqembu lendawo labahlanzi nabalungisayo, uma kwenzeka kuba nezinkinga ngesikhathi uhlala, kodwa ingxenye enkulu, sizama ukukunikeza isikhala ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Uma usidinga, wamukelekile ukusithumelela umlayezo. Noma, uma usibona esizeni, sicela usazise.